RASMI: Garsooraha Qaban Doona Kulanka PSG vs Real Oo La Shaaciyay – Miyuu U Xun Yahay Real? %
Xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA, ayaa waxay u magacaabeen Garsoore Felix Brych, inuu Garsooro kulan adag ee udhaxeeya kooxaha Real Madrid iyo PSG, kaasoo habeenka Talaada ah dhici doona, kana tirsan Champions League.
Ciyaartaan oo lugta koowaad kusoo dhamaatay 3-1, kana dhacday Bernabeu ayaa waxaa la rajeynayaa in habeenka Talaada ah ay soo bandhigaan labada dhinac muuqaal ciyaareed ku dhisan dagaal aad uculus.
Garsoorahaan reer Germany, kaasoo 42-sano jir ah ayaa wuxuu soo qabtay kulamo badan oo ay Real Madrid, waxaana kamid ah Final-kii Champions League, kaasoo ay Los Blancos, uga qaaday Magaalada Cardiff, dhigeeda Juventus.
Kooxda kubada cagta Real Madrid marnaba ma aanan laga badin kulan ay dheeleyso, iyadoo uu kulanka Garsoorayo Brych – Shan kulan waa ay badisay – Labana waa bareejo, todobadii kulan ee uu Garsooray Brych.
Waxaa kamid ah, kulamada uu qabtay ninkaan ciyaartii ay 1-0 uga badiyeen Atletico Madrid, taasoo dhacday sanad ciyaareedkii 2014-15, markaasoo goolka qura ay ka heshay Los Blancos ciyaaryahankeeda Javier Hernandez.
Guulaha kale ayaa waxay Real Madrid ka gaartay kooxaha kala ah: Copenhagen, APOEL iyo Tottenham, waxayna kala dhaceen sanad ciyaareedyadii 2013-14, 2011-12 iyo fasal ciyaareedkii 2010-11.
Bareejooyinka ayaa waxay Real Madrid la kala gashay kooxaha kala ah: Manchester United iyo AC Milan, waxayna dhaceen ciyaarahaan sanad ciyaareedyadii kala ahaa: 2012-13 iyo 2009-10.
Geesta kale, PSG dhankeeda marnaba ma aysan la kulmin guul daro, iyadoo uu ciyaartu Garsoorayo Brych, waxaana ay badisay Labo jeer halka kulan ay Bareejo gashay ciyaarihii uu qabtay Ninkaan reer Germany ee 42-sano jirka ah.
Ciyaarihii ay badisay kooxda Faransiiska ka dhisan waxay la kala dheeshay kooxaha kala ah: Olympiakos, taasoo dhacday sanad ciyaareedii 2013, Chelsea oo dhacday 2016 iyo waliba kulanki Bareejada oo ay Arsenal la gashay xagaagii 2016.